Misafidiana tongotra tsara ary mahazoa fiononana | Bezzia
Safidio ny tongony tongotra tsara ary mahazoa fiononana
Maria vazquez | 19/07/2021 20:00 | fanaka
Ny fitoeran-tongotra dia sombin-javatra tsy ampiasaina, na izany aza, manampy amin'ny fiadanantsika, hampionona anay. Isika izay miasa ao an-trano dia mampiasa azy ireo hanitsiana ny fihetsika asehontsika eo am-piasana amin'ny solosaina. Saingy tsy ireo dian-tongotra ireo no horesahintsika anio, fa ireo izay manampy antsika hampiato ny tongotsika rehefa miala sasatra ao amin'ny efitranontsika na amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Ny dian-tongotra dia lasa a mpiara-dia lehibe amin'ny fotoana fitsaharana. Ampiasaina tsara izy ireo mba hanakanana ny tongotray sy hampiroborobo ny fivezivezena. Ilaina anefa ny misafidy iray manana halavany sy tsy slip tsy hialana amin'ny olana
Raha mbola tsy nampiasa tongony tongotra aho dia maninona no izao? Mety manontany tena ianao. Misy olona mety hahasoa ny tongotry ny tongotra; ny olona izay naratra ratra manokana, manana lalan-drà na lalan-drà. Saingy tsy mila fialan-tsasatra tianao ianao manolora fitsaharana amin'ny faratampony. Iza no tsy tia maninjitra ny tongony mandritra ny fotoana fohy ...
Mahafinaritra anao ve ny mijery sarimihetsika amin'ny fahitalavitra?
Mamaky ny boky tianao indrindra ve ianao?
Sa mipetra-pialana sasatra mandritra ny 10 minitra fotsiny ianao rehefa mody?
1 Ahoana ny fomba hisafidianana dian-tongotra
1.1 Ny fomba
1.2 Ny fitaovana
Ahoana ny fomba hisafidianana dian-tongotra
Ny tongotra an-tongotra dia tsy manampy anao hanala ny tongotra reraka raha tsy mahafeno fepetra maromaro ianao. Ny tena manan-danja indrindra dia, tsy isalasalana, tandremo ny haavonao ka tsy mila mamorona ny toeran'ny tongotra isika. Tsy tokony ho avo kokoa noho ny sofa izy io, sanatria!
Tsy maintsy mitaky koa isika a cushioned na fanohanana malefaka tsara. Zava-dehibe indrindra ny hankafizana an'io padding io izay ilalaovan'ny lohalika sy ny ombelahin-tongony. Ho fanampin'izay, raha manana fironana voafaritra tsara ny dian-tongotra, toy ny maodely Omtänksam sy Poang avy any Ikea, dia hanampy antsika hampiroborobo ny fivezivezena io.
Ny fampifangaroana ny seza sy ny tongotra dia mitondra fahononan-tena sy fahamendrehana mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahininay. Ireo toetra roa azontsika hatsaraina amin'ny alàlan'ny fisafidianana andiana sofa sy sezakongo misy tsipika madio sy loko malefaka izay mamaly ny iray amin'ireo firavaka haingo ankehitriny: ny fomba Skandinavianina.
Raha mifanohitra amin'izany no tadiavinay dia ny manasongadina ny tsy firaharahana sy / na ny maha mahafinaritra ny habaka, misafidiana sombin-javatra izay mifanohitra amin'ny endriny sy / na ny lokony afaka manampy antsika hahazo izany. Izany dia mirona hanome antsika tahotra kely kokoa, saingy amin'ny alàlan'ny fanalahidy sasantsasany dia afaka hahatratra milamina voafantina isika:
Misafidiana seza amin'ny feo tsy miandany ary fitoeran-tongotra miloko hanomezan-danja ity farany.
Misafidiana tongotra tsy miandany ary ataovy miavaka amin'ny endriny na ny endriny.
Azontsika atao ny mahita ny dian-tongotra sy ny puff eny amin'ny tsena izay mety hahasoa azy amin'ny fitaovana samihafa. Ny malaza indrindra dia ireo modely vita amin'ny kodiarana mahazatra misy fonony vita amin'ny lamba, hoditra na hoditra sandoka. Amin'ity karazan-tongotra ity no ahitantsika, matetika, ireo endrika ergonomika sy / na mirona izay manampy betsaka amin'ny fampiononana azy.
Ho fanampin'izay dia mahazatra kokoa ny mahita azy poufs na fufs amin'ny lamba, crochet na raffia ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy tanjona telo: hanomezana fitsaharana ny tongotsika, hanome seza iray hafa ho an'ireo vahininay ary ho latabatra mpanampy handao ny magazine novakiantsika na ny zava-pisotro noomaninay hananana. Mba hanatanterahana ireo tanjona telo, ny pouf dia tsy maintsy apetraka, izay amin'ny fotoana maha marina azy dia mety hampandefitra ny fahafahany mitazona tongotra.
Ny fitaovana ankoatry ny fitaomana ny hatsarany sy ny fionony dia misy akony ihany koa amin'ny fahaizan'ireo tongotry ny tongotra ireo. Ary ny hitazonana azy ireo ho andro voalohany, ny sasany dia mitaky fikarakarana bebe kokoa noho ny hafa. Ary na ny mora ny fanadiovana dia hitovy amin'ny endrika amam-borona toy ny amin'ny lamba iray.
Alohan'ny hisafidiananao ny fitoeran-tongotra dia torohevitra araka izany manontania tena maromaro hahazoana marina ny safidintsika. Manontany ianao hoe: Aiza no hametrahako ny fitoeran-tongotra? Iza no hampiasa azy? Hatao inona izany? Mila izany ve aho mba hanatanterahana asa mihoatra ny iray? Zava-dehibe amiko ve fa mora ny fikojakojana sy fanadiovana azy? Valio izy rehetra fa hanampy amin'ny fampiasam-bola amin'ny fahatsiarovan-tena bebe kokoa ny vola amin'ny fividianana tongony tongotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » fanaka » Safidio ny tongony tongotra tsara ary mahazoa fiononana
Ahoana no hiatrehana ny aretin-tsaina ao anatin'ny mpivady
Fomba fahavaratra: akanjo lava misy voapaika minimalist